"Zonke 90" (tariff "Beeline"): indlela ukuxhuma egumbini?
Omunye opharetha mobile ethandwa kakhulu - "Beeline" linikeza amakhasimende ayo eziningi ongakhetha ahlukile nokwandisa inani nemibandela ukusetshenziswa nezokuxhumana. Phakathi kwalezi zinhlelo tariff nenombolo kuhlanganisiwe amaminithi, wamamegabhayithi, ukuxhumana ongakhetha namasevisi ukukusiza ukwehlisa amanani locingo, kokubili indawo yayo futhi uzulazula (kuleli zwe, phesheya).
Kwamanye amakhasimende kubhekwe plan tariff ezifanele kakhulu uma lokho inyanga eyodwa noma ngosuku lokukhokha ethize inikezelwe izinkonzo eziningi zokuxhumana. Kwabanye - okungcono kuyinto okufana lokuthi yokukhokha, okungukuthi, ngemva ukusetshenziswa, isibonelo, i-Internet noma yefoni, njll Phakathi kwalezi TP - .. "Zonke 90" (tariff "Beeline"). Indlela ukuxhuma lesi sipho esiyingqayizivele futhi yini ikhange kangaka amakhasimende, sizobe ukuchaza kulesi sihloko.
Imibandela okunikelwe plan tariff
Ngaphambi kokuba unqume ukuthi ingabe imali plan amasudi wena kumele ayejwayele imigomo, amazinga. "Zonke 90" (tariff "Beeline") (njengoba ukuxhuma isiphakamiso opharetha amaselula, kuzoxoxwa ngezansi) ihlinzeka izinkokhelo ukuthenga. Ingakapheli inyanga inani ruble 90. Isici esikhethekile Kuyaphawuleka ukuthi kulotshiwe ucime amanani alinganayo nsuku zonke. Ngakho, inzuzo sobala asikho isidingo ukwethula ngokushesha yonke imali kwi-balance sheet. Enough ku-akhawunti ukuba ruble ezingaphezu kuka-3 kuya hhayi kufike ukuvaleka zezimali.
amazinga sokushaya: tariff "Konke 90" ( "Beeline")
Ababhalisele plan tariff, okuyinto izincwadi esizifundayo, kuphakanyiswa zokuxhumana megavygodnoe namakhasimende inethiwekhi "Beeline" kuleli zwe. Njengengxenye imizuzu 100 kuzo zonke mpendulwano kuyoba khulula. Kulokhu sikhuluma izingcingo kunoma izinombolo of "Beeline" ezindaweni. Kufanele kuqashelwe ukuthi phezu okuvela ngomzuzu-101 ukushaja siqala. Ukuxhumana "Beeline" ababhalisile kuyoba ruble 1 nje (ngomzuzu inkhulumomphendvulwano ngamunye).
ingxoxo ngomzuzu nomuntu usebenzisa inani iyiphi enye inkampani - wamasevisi zokuxhumana, izobiza ruble 1.60, ikhumbula iqiniso ukuthi sibhalisiwe endaweni efanayo nawe .. Kungenjalo, intengo ngomzuzu kuyoba ruble 3.
Izindleko imiyalezo nomthamo Inthanethi
Izindleko ngokuthumela imiyalezo izinombolo yazo zonke opharetha kuleli zwe ruble 2. Busakazekela Kwamanye Amazwe - ruble 3.95. Ngo zokudayela. Imali, okuyinto iyadonswa nsuku zonke kusukela izinombolo zokubhalisa in inani ruble ezintathu, sihlanganisa iphakethe traffic Inthanethi. He is wamamegabhayithi 100 kuphela, olutholakalayo inyanga eyodwa. Yiqiniso, umuntu kulolu khetho akubonakali impela. Kodwa kuzo isimo ngangokunokwenzeka, isebenze izinketho eziseqophelweni Inthanethi, mshini utholakala endaweni yakini on the TP "Zonke 90" (yamanani "Beeline"). Indlela ukuxhuma lawa masevisi? Ungakhetha, usebenzisa imiyalo ethile futhi imibuzo, kanye nge-Umsizi Inthanethi. Futhi iyatholakala kukhona "isivinini Ulondoloze" inketho (ukuze wandise ivolumu traffic) kanye "inkinobho Turbo" ukwandisa isivinini okwesikhathi esithile.
Imali ekhokhelwa "Zonke 90" ( "Beeline"): indlela ukuxhuma?
Isici esiyinhloko plan tariff ukuthi ayitholakali ukuze ababhalisile in the domain yomphakathi. Ngokungafani nezinye izinhlelo tariff, okuyinto iya ku (noma ukuthenga inombolo entsha) kungaba ngokwakho usebenzisa izinketho elula (Internet, USSD, njll). "Zonke 90" (tariff "Beeline"), nokuthi uxhuma kanjani, uma unentshisekelo le ndlela? Isiphakamiso ukushintshela zokubhalisa TP ungathola eyodwa yezindlela kuchaziwe ngezansi.
Ngokusebenzisa telemarketing. Ngezikhathi, amaklayenti inkampani "Beeline" wathola izingcingo enokunikelwa amasevisi. Ngokwesibonelo, okukhethwa kukho izingcingo inzuzo noma i-inthanethi amaphakheji. Phakathi kwalezi ziphakamiso Kungenzeka kube TP "Zonke 90". Yiqiniso, ezifana ongakhetha ezithakazelisayo banganikeza kude akubona bonke ababhalisile. Futhi, isibonelo, labo isikhathi eside isebenzisa inombolo opharetha mobile, njalo lucwaningo amasevisi yokukhokha, kuyinto bacabange ikhasimende Fide ukhetha ukuxhumana ngaphakathi inethiwekhi.
imilayezo ye-SMS kukhona enye indlela ukwazisa amaklayenti inkampani "Beeline". "Imali ekhokhelwa 90" (mayelana izibuyekezo ingxenye enkulu omuhle, ngenxa izimo ezikahle ukusetshenziswa futhi iwubuphukuphuku imali yobulunga) lingase okunikelwe ababhalisile abavame kusebenze ekamelweni inikeza ukunciphisa izindleko ngomzuzu ngaphakathi inethiwekhi. Sicela uqaphele ukuthi uma ikamelo lakho uye wathola umyalezo ngolwazi ngalokho kuyatholakala kuwe ukuya TA ke cishe, it has sezibaliwe (sicela ufunde umbhalo womlayezo). Lokhu kusho ukuthi isikhathi esiningi ukucabanga ngeke. Futhi kusebenze tingafundziswa phakathi kwamahora athile. Landela imiyalo ku umlayezo wombhalo. Uma unemibuzo ungaxhumana isikhungo contact futhi acacise amaphuzu ezithakazelisayo kanye ukuya TA.
Isayithi (ehhovisi yangasese noma ekhasini eliyinhloko). Uma uthola isiphakamiso okunjalo futhi kuyathakazelisa kuwe, khona-ke ungalibali isikhathi, ucacise indlela ungakwazi ukushintsha uhlelo tariff (kuphela nge-opharetha noma, isibonelo, ngenye indlela).
Push-Isaziso - Kuyini? Indlela ukuxhuma nendlela ukukhubaza Push-izaziso?
Indlela ukukhubaza "MINIB" MTS eRussia
Ixhuma TV ku-intanethi.
Indlela ukubiza Queen of Spades. Ezethusayo endleleni efakazelwe
Capers, ukuthi kuyini, indlela ukulungiselela nalapho ukusebenzisa
Izindlela zokwelapha. Ultrahigh yokwelapha imvamisa
Osomkhathi Ukrainian nososayensi
Indlela ukudweba sea horse in amasu ahlukahlukene
Ile de la Caphuna: incazelo, ezindaweni ezithakazelisayo, izithombe
Taba Amahhotela ilungele wena unqambothi iholide!
Lo mbhangqwana bamakhela yangempela lwasemaphusheni castle